Madaxweynaha Puntland oo ka khudbeeyay kalfadhiga 35 aad ee golaha wakiilada Puntland-Sawirro – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Puntland oo ka khudbeeyay kalfadhiga 35 aad ee golaha wakiilada Puntland-Sawirro
Madaxweynaha maamulka Puntland Dr C/weli Maxamed Cali Gaas oo maanta khudbad ka jeediyay furtitaanka kalfadhiga golaha wakiilada ee maamulkaasi ayaa ka hadlay arimo dhowr ah oo muhiim ah.
Ugu horeyn waxaa uu ka warbixiyay wax qabadka maamulkiisa mudadii lixda bilood ee la soo dhaafay isagoo sheegay in amniga deegaanada Puntland uu hadda yahay mid aad u wanaagsan isla markaana si loo adkeeyay ammaanka in ay saldhiyo boliis laga furey magaalooyinka Eyl,Jariiban, Garacad, Qardho iyo Gaalkacyo.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in tahriibka uu dhibaato weyn ku hayo dhallinyarada Soomaaliya , waxaana uu tilmaamay in dowlad goboleedka Puntland ay isku dayi doonto in ay joojiso tahriibka.
C/weli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Puntland ayaa khudbadiisa ku soo hadal qaaday la dagaalanka kooxda nabad diidka ah ee Al-shabab, waxaana uu sheegay in ciidanka amniga ay fashiliyeen falal argagxisinimo oo kooxdaasi ay qorsheynayeen in ay ka fuliyaan deegaanada Puntland.
Madaxweyne gaas ayaa mar uu ka hadlayay arimaha dhaqaalaha Puntland waxaa uu ganacsatada ka codsaday in ay bixiyaan canshuurta.
Li faaqa hoose ka akhriso khudbadda oo dhan
Madaxweyne Al-Bashiir oo Koonfur Afrika ka tagay xilli uu jirey amar maxkamadeed